अक्टोपारे: एक प्रभावी वेब निकाल्ने उपकरण - सेमील्ट विशेषज्ञ
वेब स्क्रैपिंग वेब खोजकर्ताहरु र निगमहरु विभिन्न वेबसाइटहरु बाट फेसबुक, अमेजन, ईबे, स्वचालित रूप देखि जानकारी अनलाइन को एक थोक. अक्टोपारे एक उत्कृष्ट स्क्रैपिंग सफ्टवेयर प्रोग्राम हो जुन यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई डेटा एकत्रित गर्न को लागी केहि महान संकुल को पेशकश गर्दछ र यसलाई दृश्य फाइलहरुमा एचटीएमएल, एक्सेल र TXT को रूप मा बदलन गर्दछ।. अक्टोपारे द्वारा प्रदान गरिएको केहि उत्कृष्ट विकल्पहरू छन्:
गतिशील वेब पन्नेबाट डेटा निकाल्नुहोस्
अक्टोपारे एक सजिलो प्रयोग उपकरण हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई वेबसाइटबाट सामग्री हटाउन मद्दत गर्दछ। - car appraisers. यसले गतिशील वेब पृष्ठहरूसँग काम गर्दछ, पृष्ठ समाप्ति सँग स्क्रैपिंग सहित. यसको अतिरिक्त, यसको क्लाउड सेवाले धेरै मात्रामा डाटा प्राप्त गर्न र भण्डारण गर्न सक्छ.
धेरै अवस्थामा वेब searchers वेब पृष्ठहरू देखि विशिष्ट डाटा फेला पार्न देख रहे हो, तर तिनीहरूले आवश्यक जानकारी पाउन सक्छौं देखि बटोरता लुकेको डाटा, किनभने वेबसाइट जटिलता वा कुनै अन्य कारणको लागि. अक्टोपारे सबै लुकेको सामग्री फेला पार्न र हटाउन सक्दछ.
अनन्त स्क्रॉलिंग संग सामाग्री हुन्छ
अनंत स्क्रॉलिंग संग डेटा स्क्रैपिंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ. वेब खोजीकर्ताहरूको वेबसाईटहरूलाई उनीहरूको थप पाठ वा छविहरू लोड गर्न भ्रमण गर्ने वेबसाइटहरूको तलल्लो तल स्क्रोल गर्न आवश्यक छ. सामग्रीहरू पृष्ठको तल्लोमा तल स्क्रोल रूपमा लगातार लोड हुनेछ.
अक्टोपारेले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक निश्चित वेबसाइटमा पोस्ट गरिएका सबै हाइपरलिंकहरू निकाल्न मद्दत गर्न सक्दछ. वास्तवमा, यो स्याण्ड्स आईपीहरू स्वचालित रूपमा सजिलो प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्दछ, र एकै समयमा, यो उन्नत विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै अज्याक्स टाइमआउट, बिल्ट इन XPath उपकरण, आदि।. साथै, अक्टोपारेले विशिष्ट अनुरोधहरूको साथ वेब खोजीकर्ताहरूको डेटा क्रल गर्न सक्छ र सफलतापूर्वक संरचित डेटा डेलिभर गर्न सक्छ.
(2 9) कार्य को विभाजन गर्दछ
प्रयोगकर्ताहरु को लागि, यो आफ्नो कार्य विभाजित गर्न को लागी बेहतर छ,. उनीहरूको डेटा धेरै सुरू गर्नुको सट्टा, उनीहरूले एक निश्चित कार्य दुई परियोजनाहरूमा अलग गर्न सक्छन्.
अक्टोपारे के साथ, वेब प्रयोगकर्ताहरूले केहि चीजहरू गर्न सक्छन्, एक निश्चित वेब पृष्ठ खोल्न, खातामा लगइन गर्न, तस्विरहरू डाउनलोड गर्नुहोस्, पाठ प्रविष्टि गर्न र धेरै धेरै. अक्टोपारेले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई उन्नत जटिलसँग पनि प्रदान गर्दछ जसले उनीहरूलाई थप जटिल डेटासँग सम्झौता गर्न मद्दत गर्दछ. उदाहरणका लागि, यो मोड प्रयोग गर्न, प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न कार्य कन्फिगर गर्न अपरेटिङ प्रणाली डिजाइनर भित्र ब्लकहरू ड्रप र ड्रप गर्न आवश्यक छ।. स्मार्ट मोडले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक्सेलमा स्वचालित रूपमा एक बटन थिचेर स्वचालित रूपमा कुनै पनि वेब पृष्ठ बारी गर्ने विकल्प प्रदान गर्दछ. वास्तवमा, यस मोडले सूची पृष्ठहरूको तालिकामा उत्कृष्ट रूपमा काम गर्छ, जस्तै खोज नतिजा वा कोटिको पृष्ठहरू.